Eric Cantona” Qalad weyn ayey ahayd in Jose Mourinho aad qaadato adigoo diidaya Pep Guardiola | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Eric Cantona” Qalad weyn ayey ahayd in Jose Mourinho aad qaadato adigoo diidaya Pep Guardiola
(10-9-2018) Halyeygii kooxda kubadda cagta Manchester United eee Eric Cantona ayaa sheegay in tababare Jose Mourinho uu jiho khaldan u wado kooxda, isla markaana aanay guul gaadhi karaynin sida ay hadda tahay.
Cantona oo ay da’diisu tahay 52 jir, ayaa u saftay Manchester United 185 ciyaarood oo horyaalka Premier League ah, waxaanu u dhaliyey 82 gool, isagoo kula guuleystay afar koob oo Premier League ah iyo laba FA Cup, waxaana lagu tilmaaamaa inuu yahay qofka koowaad ee sababta u ahaa in kooxdu guulo gaadho muddadiii uu joogay.
Cantona oo u warramayey wargeyska Daily Mail, waxa uu tibaaxay in shakhsiyan uu Jose Mourinho yahay qof wanaagsan, hase yeeshee tababarenimada Manchester United ay jiho khaldan ula weecatay.
Masuuliyiinta Manchester United ayuu sheegay inay khalad sameeyeen markii ay Pep Guardiola ka leexdeen ee ay Mourinho ka door-bideen, waxaanu yidhi isaga oo arrintaas ka hadlaya: “Manchester United waa koox weyn, mar walbana way sii ahaan doontaa. Way ku guuleysan doonaan koobab, waanan ogahay, laakiin sida ay hadda u ciyaarayaan, waxba ku heli maayaan. Tababaruhu si khaldan ayuu u ciyaarsiinayaa, taageereyaashuna lama dhacsana. Farxad la’aan waxba lama abuuri karo. Mourinho waan jecelahay shakhsiyaddiisa, laakiin sida uu u maamulayo United lama dhacsani. Waxay ahayd (Manchester United) inay raadsadaan Pep Guardiola, waanu u iman lahaa (ka intii aanu Man City tegin).”